Izinhlungu Zokumaketha Nge-imeyili Efanayo ... Iminyaka eyi-10 Kamuva. | Martech Zone
Izinhlungu Zokumaketha Ezifanayo Ze-imeyili… Ngemuva kweminyaka eyi-10.
NgoLwesibili, Okthoba 18, 2011 NgoLwesine, Septhemba 19, 2013
Ngishaye umgwaqo ngesonto eledlule ukuvakashela i- UDelivra iklayenti bese ukhuluma kwifayela le- Inhlangano Yezimakethe umcimbi e-Providence, RI. Engikufundile yilokhu… abathengisi be-imeyili banezinkinga ezifanayo abazenza eminyakeni eyi-10 eyedlule ngenkathi ngiqala kuleli bhizinisi. Ngaphandle kokuthuthuka kobuchwepheshe nokwamukelwa, abathengisi bangempela balwa nsuku zonke namasu wokwakha uhlu, ukuzibandakanya, ukukala, ukulethwa, amanani avulekile namanye amaqhinga we-imeyili. Bengisephaneli mayelana namasu ayisisekelo wokwakha uhlu futhi igumbi ligcwele… igumbi lokuma kuphela!
Izindaba ezinhle, uma kuqhathaniswa nalapho sasikhona eminyakeni eyi-10 eyedlule, ukuthi kunolwazi oluningi lolwazi, izibalo nobungoti ukusiza ukuxazulula lezi zinkinga. Kaningi kunalokho, engikutholile ukuthi abathengisi be-imeyili bahlakaniphile, bahlakaniphe ngempela. Banolwazi namasu okwenza imikhankaso emikhulu ye-imeyili; badinga nje izinsizakusebenza ezingcono kungaba yimali, abasebenzi noma isikhathi.
Ngifisa ukwazi ukuthola kuleli qembu… yiziphi izithiyo ezinkulu obhekene nazo ngezinhlelo zakho ze-imeyili? Ingabe:
Dizayina i-imeyili esebenziseka kalula
Uyini Umbono Wokubaluleka Kwakho?